Posted at 13:08 6 Agoosto 202113:08 6 Agoosto 2021
Ma si dhab ah ayuu u dhammaaday waayihii Messi ee Barca, xaguuse ku wajahan yahay?
Kaddib markii ay Barcelona ku dhawaaqday in Lionel Messi "uusan sii joogi doonin", taas ma waxay ka dhigan tahay in laacibka reer Argentine ay uga dhammaatay Nou Camp?
Posted at 12:46 22 Abriil 202112:46 22 Abriil 2021
Ninkan oo 28 sano jirka ah ayaa la xiray kaddib markii xubno ka mid ah meydka hooyadiis laga helay iyagoo ku kala firirsan guri uu ka deggan yahay magaalada Madrid ee caasimadda Spain.
Posted at 13:50 25 Disembar 202013:50 25 Disembar 2020
Boqorka Spain oo weerar dhanka afka ah ku qaaday aabihii oo dalka ka maqan
Boqorka dalka Spain boqor Felipe VI ayaa caraka ku dhuftay aabihiisa dalka ka cararay ka dib markii ay soo baxeen fadeexooyiin musuqmaasuq, isaga oo sheegay "in anshaxa ay tahay in uu ka sareeyo qoyska".
Posted at 3:30 23 Oktoobar 20203:30 23 Oktoobar 2020
Faransiiska ayaa bandowga habeennimo kusoo rogi doona magalooyiin dheraad ah si wax looga qabto faafitaanka cudurka coronavirus, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasiJean Castex.
Posted at 15:22 20 Sebtembar 202015:22 20 Sebtembar 2020
Posted at 17:43 24 Agoosto 202017:43 24 Agoosto 2020
Dilkii Gallostra wuxuu shaaca ka qaaday fadeexad ka jirtay Mexico.
Posted at 3:11 17 Luulyo 20203:11 17 Luulyo 2020
Zidane: "Xirfadyahan ahaan waa mid ka mid maalmihii iigu fiicnaa"
Zinedine Zidane ayaa sheegay in ku guuleysiga horyaalkii ugu horreeyay 'La Liga' ee uu la qaaday Real Madrid muddo seddex sano ah uu uga farxad badan yahay ku guulaysigii Horyaalka Yurub ee Champions League.
Posted at 2:40 5 Luulyo 20202:40 5 Luulyo 2020
Trump oo amray in la sameeyo beerta 'halyeeyada qaranka'
Isagoo ka carooday taalooyinka la burburinayo, ayuu Madaxweyne Donald Trump waxa uu doonayaa in Mareykanka uu beer qaran oo cusub loo sameeyo halyeeyadii Mareykanka si ixtiraam loogu muujiyo.
Posted at 7:11 24 Maajo 20207:11 24 Maajo 2020
Tartanka horyaalka Spain ee La Liga oo dib u bilaabmaya
Ra'isal wasaaraha Spain, Pedro Sanchez, ayaa sheegay in tartanka horyaalka kubadda cagta La Liga ee dalkaasi dib u furmi doono laga bilaabo 8 Juun hase yeeshee aan taageerayaasha loo ogolaan doonin in ay garoonnada tagaan.